Serivisy Visa - mpanamboatra tapitrisa
Fanampiana Visa ho an'ny
Izahay dia mamelona ny mpanjifanay amin'ny faharetana sy famindram-po be.
Manome vahaolana namboarina manokana ho an'ny olon-tsotra, fianakaviana, orinasa kely, orinasa lehibe indrindra manerantany ianao izay miasa tsara indrindra ho anao.
Zarao aminay ny zavatra takinao ary hotarihinay anao ny fomba, manerana an'izao tontolo izao.
Hangataka Quote Mila mahafantatra
Ny serivisy lehibe
Mikaroka amin'ny firenena
Hijery araka ny faritra
ponenana | zom-pirenena | Fahazoan-dalana miasa | Visa
Fahazoan-dàlana amin'ny fonenana
Ny serivisy lehibe misy ifandraisany amin'ny fanampiana an'i Visa
Safidio ny firenena amin'ny serivisy Visa
Select Region Eoropavondrona EraopeaninaAfricaAsiaAostraliana sy OseanaKaraibaAfovoany atsinananaAmerika AvaratraAmerika atsimo Select Firenena
Firenena Visa ambony indrindra
Bosnia sy Herzegovina
Ny fijerin'ny fizotrany
Karazana karazana Visa
Nahoana no antsika?
Amin'ny maha-olon-tokana na tompon'ny orinasa tsy miankina na orinasam-bola iray, ny olona rehetra dia tohanana tsy amin'ny fizotran'ny fitantanana ny asa andavan'andro, fa miaraka amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny vanim-potoana fohy sy maharitra. Saingy satria miakatra ny vidin'ny asa aman-draharaha ary mitaky ny fanarahan-dalàna miteraka fanamby lehibe kokoa, dia mety hieritreritra ianao hoe ahoana no hanohizanao - tsy hilazana firoboroboana - mandritra izao vanim-potoana vaovao izao.
Dingana amin'ny dingana dingana - manomboka amin'ny fahombiazana
Dingana 1: Fantatrao ny filàn'ny tsirairay / Fianakaviana / Business.
Dingana 2: Safidy ny fotoana / safidy tsara indrindra amin'ny fanatanterahana fahombiazana amin'ny Tanjona sy tanjona.
Dingana 3: Mandefa safidy tsara indrindra amin'ny fankatoavana.
Dingana 4: Raha azo atao dia manara-maso fitsidihana ny firenena, raha tsy efa teo.
Dingana 5: Halalino ny fahafaha-manao.
Dingana 6: Torohevitra kaonty sy hetra, raha ilaina izany.
Dingana 7: Famintinana sy fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fotoana mety.
Dingana 8: Fanaraha-maso amin'ny dingana.
Dingana 9: Fanomanana sy fandefasana ireo manampahefana voakasik'izany.
Dingana 10: FETY!
Fizahan-tany sy orinasa
Ny vahiny mandeha any Argentina ho an'ny fizahan-tany sy ny orinasam-barotra dia atolotra visa 90 andro rehefa tonga, ary tsy mila mangataka visa alohan'ny fotoana. koa avereno jerena miaraka amin'ny masoivoho Arzantina na Consulate ny firenena alohan'ny hanaovana ny dia dia misy fampahalalana hafa azo avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany Arzantina.
Visa ho an'ny mpianatra
Azonao atao irery ny maka an'io visa io raha toa ka misoratra anarana amin'ny sampam-pampianarana any Arzantina ianao ary efa nankatoavin'ny departemanta mifindra monina ao Arzantina. Amin'ny ankapobeny dia mitombina mandra-pahatongan'ny fotoam-pianarana ataonao, ary tsy azo havaozina.
Ity visa ity dia natao ho an'ny olon-tsotra mikasa ny hipetraka any Argentina ary hiasa amin'ny orinasa Arzantina izay voasoratra anarana amin'ny minisitry ny fifindra-monina, ary nahazo alalana hampiasa mpiasa vahiny. Ny ankamaroan'ny fotoana dia afaka mangataka an'io visa io ianao na alohan'ny hidiranao na tsia.
Visa mpamatsy vola
Na iza na iza afaka manaporofo ny fidiram-bola kely indrindra azo antoka isam-bolana mitentina 8,500 2,200 ARS izay mitentina XNUMX XNUMX dolara dolara, ary manome toky ao amin'ny kaontin'ny banky Argentinean afaka mampihatra an'io karazana visa io. Raha mbola afaka manolotra tahirin-kevitra ny mpangataka izay manaporofo fa mitohy ny vola miditra mandritra ny misy azy any Argentina, dia mety hangataka visa Financier izy ireo.
Ny fangatahana visa amin'ny fisotroan-dronono, toy ny visa amin'ny Financier, ny olona iray dia mila manana fidiram-bola kely indrindra amin'ny fangatahana visa visa Fisotroan-dronono dia mitaky ny hanaporofoanao ny fidiram-bola farafahakeliny ambany indrindra amin'ny $ 8,500 ARS (eo ho eo amin'ny $ 2,200 USD). Tsy maintsy napetraka ao amin'ny bankin'i Arzantina ny vola.
Ny antontan-taratasy izay matetika no angatahina amin'ny fampiharana dia:
Pasipaoro manana fanomezan-kery farafaharatsiny 6 volana aorian'ny daty nahatongavany
Fepetra fampiharana vita
Saripika efatra ny sary momba ny pasipaoro efatra
Famandrihana tapakila tapakila
Famandrihana trano fandraisam-bahiny na taratasy fanasana avy any Arzantina na fianakaviana mipetraka
Famerim-bola ny saram-pampianarana
Porofon'ny vola raha afaka manohana azy ny mpangataka
Ny antontan-taratasy hafa azonao angatahina amin'izany dia ny: fanamarinam-pahaterahana, fanamarinam-panambadiana tany am-boalohany, ny taratasy fanamarinan'ny fisaraham-panambadiana (raha misy), misy ny antontan-taratasy momba ny fanovana anarana, sns. Ireo antontan-taratasy rehetra ireo dia tsy maintsy hazavaina sy hampihemotra ao amin'ny firenena. ny famoahana azy ireo, avy eo adika amin'ny teny Espaniôla ary notohanan'ny fitsarana Arzantina.
Olom-pirenena eropeana rehetra
Ny tompon'ireo pasipaorin'ireo firenena manaraka ireo dia tsy maintsy mampiasa mari-pankasitrahana navoakan'i Arzantina fa tsy visa rehefa mandeha:
Repoblika demokratikan'i Arabika Sahrawi
Tokony horesahina ihany koa fa ho an'ny olom-pirenena any Bolivia, Brezila, Kolombia, Chili, Ekoatera, Paraguay, Peroa, Orogoay ary Venezoela dia mora kokoa, tsotra ary tsy manahirana. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny Konsulat Arzantina any ivelany na any Argentina. Maharitra roa taona ny fahazoan-dàlana ary havaozina.
Manolotra vahaolana marobe eo ambanin'ny tafontrano izahay, fiaraha-miasa 1 ho an'ny filàna fitomboana eo an-toerana na amin'ny tontolo iainana.
Eo foana ianao hamaly ny fanontanianao, hanohana anao amin'ny tanjonao sy ny fanirianao, hanampy anao hamonjy fotoana sy vola.
Tsy mitovy ny zavatra takian'ny tsirairay, noho izany dia mamolavola vahaolana foana izahay, ho an'ny làlan'ny fivoarana iraisam-pirenena.
Ny fandoavam-bola amin'ny serivisy ataonay dia mifaninana tena tsy misy ny takona miafina, izay miasa ho an'ny rehetra, na olona ianao na olon-dehibe, antonony na orinasa lehibe.
Nandritra ny taona niarahany niasa tamin'ny tsirairay, fianakaviana ary orinasa, dia namolavola fahalalana lehibe izahay nanerana ny serivisy serasera marobe.
Manana ekipa matihanina izahay, mpiara-miasa ary mpiara-miombon'antoka hanomezana harena ny mpanjifa.
Izahay dia mpiray tsikombakomba, mpamatsy serivisy, mpisolovava, CFP, Accountant, Realtors, manam-pahaizana momba ny fitantanam-bola, manam-pahaizana momba ny fifindra-monina ary olona mahay mifototra amin'ny valim-pifidianana.
Rehefa miatrika fanapahan-kevitra henjana isika dia tsy mampandefitra ny soatoavintsika sy ny fitsipiny akory isika. Manao ny tsara isika fa tsy izay mora indrindra.
Izahay dia manompo ny tsirairay, ny fianakaviana ary ny orinasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena, noho izany dia afaka mampandeha sy mampisondrotra ny fivoarana manerantany.
Eto izahay mba hanatsotra ny fifindra-monina, ny fitomboanao, ny fanitarana ary ny filàna amin'ny alàlan'ny fanomezana fifandraisana 1 mifampiresaka.
Ny fahatongavantsika miavaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena lehibe dia manome anay, fahalalana ara-pahaizana an-toerana izay mamela anay hanome anao ilay sehatra fanohanana feno indrindra.
Sampandraharaha mifindra monina: 22156.
Sampandraharaha ara-dalàna: 19132.
Serivisy IT: Projet 1000+
Serivisy orinasa: 26742.
Milliona Makers amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa iraisantsika iraisam-pirenena sy ny fikambanana miaraka amin'ny Professional CFA, Accountants, Associates Financial, Team of Immigration Attorney, dia mitantana fantsom-bola be dia be amin'ny mpandoa hetra isam-batan'olona sy orin'asa mpandraharaha iraisam-pirenena miasa any amin'ny sehatra rehetra ary manana mpanjifa mamerimberina amin'ny fahatsinjovana ny fotoana maharitra anay. fifandraisana amin'ireo mpanjifantsika mandritra ny taona maro dia noho ny serivisy serivisy, ny fiaraha-miory ary ny vidin'ny fifaninanana.
Manome serivisy fitantanana sy / na serivisy amin'ny orinasan-tserasera iraisam-pirenena nampidirina tao amin'ireo sehatra voalaza etsy ambany izahay:
Raha manantena ny kaonty sy ny fanaovana kaonty amin'ny firenena ianao, izay tsy voatanisa ao amin'ny tranokalanay dia azafady mba hifandraisanao mivantana amin'ny e-mail
info@millionakers.com na ny antso Aotrisy +43720883676, Armenia +37495992288, Kanada +16479456704, Polonina +48226022326, UK +442033184026, Etazonia +19299992153
Tsy manohana na manome ny serivisy amin'ny sokajy voatanisa etsy ambany ho an'ny olon-tsotra sy / na orinasa izahay:
Izay fitaovana mety hitarika fanararaotana amin'ny zon'olombelona na hampiasaina amin'ny fampijaliana.
Varotra, fizarana na famokarana fitaovam-piadiana, fitaovam-piadiana, am-bala, mpikarama an'ady na fivarotana fifanarahana.
Fanaraha-maso ara-teknika na fitaovam-piadiana feno na fitsikilovana indostrialy.
Misy hetsika tsy ara-dalàna na mpanao heloka bevava na olon-tsotra izay mainty lisitra ao ambanin'ny lalàna misy any amin'ny firenena.
Ireo akora mampidi-doza na mampidi-doza mampidi-doza, simika na nokleary izay misy koa, fitaovana na milina ampiasaina amin'ny famokarana, fitantanana na fanilihana ireo fitaovana ireo.
Varotra, fitahirizana na fitaterana taova olombelona na biby, manararaotra biby na fampiasana biby mba hanaovana fitsapana siantifika na vokatra.
Agence adoption, ao anatin'izany ny fomba fanaon'ny ray aman-dreny mivadika na fanararaotana amin'ny zon'olombelona;
Ny kolontsaina ara-pivavahana sy ny fanomezam-pahefana ananany.
Ny asa fandraharahana, izay amin'ny alàlan'ny lalàna sy ny fitsipi-pifehezan'ny firenena namorona ny Ento dia iharan'ny fahazoan-dàlana ary izay tarihiny tsy misy fahazoan-dàlana.
Torohevitra momba ny matihanina ary Support